Indawo kaBackpacker-Ibhasi kunye neSikhululo sikaloliwe Gem
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguZahari
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uZahari iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Ilitye elincinci labahambi abanomdla kunye nabantu abakholelwa ukuba ubumnandi bobomi bufihla kwizinto ezilula! Ekunene ecaleni kweCentral Bus kunye nezikhululo zikaloliwe zaseSofia. Iqhagamshelwe kuzo zonke ezinye iindawo zesixeko nge-metro kunye nazo zonke ezinye iintlobo zezithuthi zikawonke-wonke.
Kukho imidibaniso emibini ye-WiFi ekhoyo kuwe, kuxhomekeke kubuchule besixhobo sakho. I-100 Mbps eqhelekileyo kunye ne-intanethi ekhawulezayo ye-300 Mbps igubungela yonke impahla.
Indawo yam incinci kwinkangeleko yokuqala, kodwa inkulu ngokwaneleyo ukuba ibe nazo zonke izinto ezibalulekileyo.
Ukungena, uya kufumana ukugcinwa kwezihlangu ngakwesobunxele nasekunene kwakho - umphefumlo wendlu yonke - ifriji! Ukudlala nje, kodwa qiniseka ukuba uyilayisha "ngamafutha" afanelekileyo kuhambo lwakho olungenasiphelo lwesixeko. Ungathenga iziqhamo ezitsha, imifuno kunye nokunye okuninzi kwivenkile enkulu yakwa-BILLA (uhambo lwemizuzu emi-5 ukusuka kwindawo yam) evulwa ngo-7:30 AM - 11 PM phakathi evekini kunye no-8:30 AM - 9:30 PM ngeempelaveki.
Kwikona yasekhohlo kwenziwa umxube phakathi kokutyela kunye nendawo yokuphumla. Nokuba awuyicwangcisi ukuyisebenzisa, zama isitulo esingwevu nokuba kukanye - imnandi kakhulu! Indawo yokulala iqulethe ibhedi ephindwe kabini kunye nembono enkulu yeBrooklyn Bridge - indawo yakho elandelayo okanye yokuphupha, mhlawumbi? Eyam, ubuncinci! =)
Igumbi lokuhlambela kunye neWC ziyadityaniswa. Akukho mfuneko yokuba ukhankanye ukuba uya kunikwa iitawuli ezicocekileyo kunye namashiti.
I-Wi-Fi ekhawulezayo kunye ne-Cable TV ziya kuba ngabahlobo bakho abasenyongweni kubuvila bakho okanye iiyure zokusebenza. I-A/C yokukupholisa kwiinyanga ezishushu kunye ne-heater ukuze ufudumale kwiindawo ezibandayo.
Kwaye ungalibali ukonwabela imbonakalo entle yesibhakabhaka ukusuka efestileni-ubuhle kokubini kwimini enelanga kunye nakubusuku obuneenkwenkwezi! =)
4.70 · Izimvo eziyi-132
Ikota yeBanishora ikumntla-ntshona ukuya kumbindi weSofia. Sesona sithili sikufutshane neCentral Railway kunye nezikhululo zeebhasi. Phakathi kwesitrato sam kunye nezisijikelezileyo, uya kubona uninzi lwezakhiwo zezitena ezakhiwa emva kweminyaka ye-90s. Ekupheleni kwayo, uya kufumana ipaki yedolophu encinci, ebizwa ngokuba yi "Jardin d'Algeo". Kwimizuzu embalwa uhamba uya kufumana isitrato "Opalchenska" apho uya kufumana i-ATM (CIBank), iPosi (inombolo yesitrato 112A), icuba leeyure ezingama-24 kunye nevenkile ethengisa utywala (inombolo yesitrato 108) kunye netshizi newayini. ivenkile (i-102B, i-bulgarian cheese kunye newayini kufuneka !!!).
Umbuki zindwendwe ngu- Zahari
Iqela loMphathi weFlethi lisesandleni sakho ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho. Kuyo nayiphi na imibuzo, zive ukhululekile ukuthumela umyalezo okanye uqhagamshelane nathi kumgca wethu we-24/7 wefowuni.